Semalt: Tanga Kubvisa Referral Spam Kubva kuGoogle Analytics Parizvino
Vanhu vazhinji vanoona kushamiswa kunoshamisa kunowanzobuda muGoogle Analytics. Iwe une dambudziko rakafanana here? Pasina mubvunzo, matani ekushanyira iwe webhusaiti yako ndeyechokwadi nokuti nokuti vanhu ivavo havatombotauri kunzvimbo yako nevanotengesa.
Kana iwe usinganzwisisi kuti Google Analytics inoshanda sei, unogona kuvhiringidzika pamusoro pehuwandu nemashoko unogamuchira zuva rega rega - office network wiring. Google Analytics inoronga chitengesi chako uye ichichiparadzanisa muzvikamu zvakasiyana, zvichibva pamatare e IP nemari. Dzimwe makambani ekutsvaga kuparadzanisa mafaira ako eGoogle Analytics uye kuratidza zvikanganiso zvakakanganisa. Vanotakura motokari dzisiri dzechokwadi kune webhusaiti yenyu kuburikidza nemichina yakawanda.
Jack Miller, Mutungamiri Mukuru weChishanu Mutevedzeri weChita Semalt , anotsanangura pano kuti angachengeteka sei kutumira spam muGoogle Analytics.
Kubvisa kutumirwa kwepamu kubva kuGoogle Analytics
Zvakaipa sezvavasati vamboreva nzvimbo yako kune mumwe munhu uye kushanyira kwaunogamuchira hakubvumirwi. Mune mamwe mazwi, tinogona kutaura kuti hauzombogoni kutungamira uye haugoni kutengesa zvigadzirwa zvako uye maitiro nekuda kwekufambiswa kwechokwadi. Kutaura nokutendeseka, unofanira kubvisa kutumira spam kubva kuneGoogle Analytics mushumo usati wasvika search engine s svondo uye chengetedza website yako.
Google yatanga mazano, mazano, uye mazano ekuchengetedza mawebsite kuti aponese. Iwe unogona kungovhara kuendeswa kwepamu uye inonyorera kero dze IP mukusika mafuta. Sezvo iwe usina kugamuchira kushanyirwa kwechokwadi, spammers inogona kukanganisa nzvimbo yako uye kukuvadza neGoogle Analytics. Maererano nekufungidzira, vanopfuura 12 muzana mabhizimusi vanorapwa gore negore nekuda kweiyi nyaya.
Kuumba zvikamu muGoogle Analytics zvinogona kudzivisa kutumira spam
Unogona kugadzira zvikamu mumabhuku eGoogle Analytics nekuzarura chikamu chekuona chiri nemashoko iwe unogona kushandisa. Pano iwe unofanirwa kuenda kuNhoroondo yeTabvu uye uzarure miremo unoda kuchinja kana kuchinja. Ndiyo nzvimbo yaunofanira kugadzira zvikamu nekukanda iyo Yanga Chikamu chisarudzo. Iwe haufaniri kukanganwa kutumidza zvese zvezvikamu kuti usapinda chero kudii munguva yemberi. Kamwe zvikamu zvanyatsogadzirwa, danho rinotevera nderekuchengetedza kuchinja. Iwe haufaniri kuvhara firiji usati waponesa zvose zvekuchinja.
Zvinoita kuti isu tifare toni yekushanyira zuva rimwe nerimwe. Asi kana wakarova SEO kana kambani ye spamming, pane mikana yokuti ivo vanokunyengedza neimwe nzira kana imwe. Vanogona kuisa mapainari asina kuiswa uye zvinyorwa kuvhareji yako pamwe neShokoPress. Kushandisa basa ravo kune ngozi nokuti bhizinesi renyu rinogona kuvharirwa paIndaneti.
Kana iwe uchida kubudirira kuburikidza neIndaneti, haufaniri kushungurudza kushandisa zvishandiso. Nguva dzose yeuka kuti havasi kukupa iwe kushanyirwa kwechokwadi asi kutumira spam. Iyo chaiyo inoshanyira ichatenga zvimwe zvezvigadzirwa zvako, uye zvinyorwa zvavanowedzera mubhuku rako reGoogle Analytics zvingawana nzvimbo yako yakarambidzwa kweupenyu hwose.